Magafeyaasha Soomaaliyeed Ee Turkiga ku Nool:-(Akhriso) – hareerley News
Dhaliyarada Afka Turkiga baratay, ee ku nool dalkan Turkigu, waxa ay dadka yimaadda u gaystaan tacaddiyo aan lasoo koobi karin. Tusaale ahaan, Dhakhaatiirta inta ay heshis la galaan ayay dadka dul saaraan lacag, lacagtaas oo aad u badan marka loo eego dadka danyarta ah ee halkan caafimaadka usoo raadsada. Kudarso oo, qofkaasi lacag turjubaannimo ah na wuu ka qaaday.
W/Q :-Naciima abwaan Qorane.
Mid ka mid ah labadii wiil ee qalliinka lagu kala fujiyay iyagoo madaxa iskaga dhagan ayaa indhaha kala furay afar maalmood ka dib markii lagu sameeyay qalliinka taariikhiga ah, sida uu dhakhtar sheegay. Jaga oo labo jir ah ayaa sidoo kale bishimaha dhaqaajiyay, wuxuuse u baahan yahay in maalin kaste kalyaha loo sifeeyo, maadaama oo […]
Trump oo baajiyay safarkiisii Denmark “muranka gadashada jasiiradda Greanland” darted
Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda oo lagu Eedeyay inay guryahooda ku hayaan Xubno Shabaab ah:-(Dhageyso)